बच्चा जन्माउँन नसकेको भन्दै नेपाली सेनामा कार्यकर्त प्रतापले या’तना दिदा ज्यान फालिन आशाले ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/बच्चा जन्माउँन नसकेको भन्दै नेपाली सेनामा कार्यकर्त प्रतापले या’तना दिदा ज्यान फालिन आशाले !
‘छोरीको घर विग्रन्छ भनेर सहेर पनि घरमै बस्नुपर्छ भनेर सम्झाए, गिताले भनीन् छोरी रहेमात्र छोरीको घर हुन्छ भन्ने समयमा नबुझदा आज कोख रित्तो भयो ।’ सम्धीले मेरा छिमेकीलाई छोरी झु ण्डीएको भनेर फोन गरेपछि मैले थाहा पाएकी हुँ उनले भनीन् यहाँबाट मेरा आफ्न्त घटनास्थल पुग्दा छोरी भुइमा ल डेको र टाउकोमा चो ट लागेको अवस्थामा मृत फेला परेकी रहेछिन् । उनले भनीन् घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरि अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । उनले आफुलाई जानकारी समेत नदिई छोरीका परिवारले हतार हतारमा सतगत गरेको आरोप लगाईन । घटनास्थलमा छोरीले लेखेको नोट पनि भेटिएको थियो रे, गिताले भनिन् मेरी छोरीलाई मर्न बाध्य बनाउनेलाई तुरुन्तै पक्रेर कारबाही गर्नुपर्छ ।